Laber® U Profile Glass Factory | China Laber® U Profile Glass Manufacturers, mpamatsy
Taratasy vita pirinty & seram-peo & Frosted-ambany-U U Pejy / U Channel fitaratra
Ny fampahalalana fototra ny mombamomba ny mombamomba ny Tinted U dia loko fitaratra izay mampihena ny fandefasana maso sy ny hazavana. Ny fitaratra vita pirinty dia saika mitaky fikarakarana hafanana mba hampihenana ny fihenan-tsasatra mety hitranga sy ny fahatapahana ary manandrana hamerina ny hafanana tsy voakasiky ny hafanana. Ny vokatra fitaratry ny mombamomba U antsika dia tonga amin'ny loko isan-karazany ary ampilaharina amin'ny fifindrana maivana. Torohevitra ianao handidy santionina fitaratra tena an'ny fisolo tena loko miloko. Voaroaka ny fronts seramika miloko amin'ny 650 degre Celsius mankany amin'ny b ...
Ny fampahalalana fototra ny mombamomba ny mombamomba ny U na ny fitaratra ny fantsona U dia avy any Aotrisy. Izy io dia novokarina nandritra ny 35 taona mahery tany Alemaina. Satria iray amin'ireo fitaovana mahazatra ampiasaina amin'ny tetikasan-trano lehibe, ny fitaratra U profil dia mihatra be any Eropa sy Amerika. Voamarina nanomboka tamin'ny taona 1990 ny fangatahana ny fitaratra ny mombamomba ny U any Sina. Ary ankehitriny ny faritra maro any Shina dia mampiasa izany noho ny fironana iraisam-pirenena famolavolana. Ny mombamomba ny mombamomba ny U dia iray amin'ireo solomaso manipy fitaratra. Fivoarana miorina amin'ny t ...
Rafitra ambany-piraofam-bolo ambany vy U
Fampahalalana fototra Ny fitaovam-panamaso vera vy vita amin'ny famoahana vera herinaratra fitaovana (UBIPV) dia mitambatra ny tombony azo amin'ny tranoben'ny tranokala U sy ny rafi-pahefana amin'ny herin'ny masoandro mba hampiroborobo ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny famokarana angovo ary ny fampihenana ny famoahana. Ny UBIPV sy ny tanàna dia afaka mirindra tsara mba hahatonga ny fotovoltaic ho zon'ny fiainana olombelona. Tsy vitan'ny fananganana trano ihany, fa afaka mamita angovo sy angovo famokarana angovo ihany koa, ary mety ho tafarina miaraka amin'ny ...
Fampahalalana fototra Ny mombamomba ny fitaratra U fantsom-pivarotana fantsom-pejy Ny fangaro ny aesthetics sy ny fampiasana Ny safidy ny fitaratra ho an'ny tarehy sy ny fisarahana amin'ny birao dia tsy tokony hoheverina ho mendrika. Tokony handinihanao foana ny safidinao mba hiafaran'ilay sary tonga lafatra. Raha izao no ataonao izao, dia ny fitaratra ny mombamomba ny U antsika dia mendrika mijery azy. Tsy vitan'ny hoe manintona ihany, fa ity karazana U profil / vera fantsom-bolo U ity koa dia mirehareha fananana maro izay mety tsara amin'ny ivelany sy amin'ny ...